I-Zanclus cornutus okanye isithixo samaMoor, umceli mngeni kweyona ngcali yintlanzi | Ngeentlanzi
Sibuya nenye yeentlanzi zasemanzini ezifunwa kakhulu yi-aquarium hobbyist. Imalunga neentlanzi zezithixo zamaMoor. Igama layo lenzululwazi ngu I-Zanclus cornutus kwaye yenye yezona zinto zifunwayo nezifunwayo kwicandelo. Yintlanzi yekorale enemibala yayo eyenza ukuba ibe ntle ngokungaqhelekanga. Yintlanzi enzima ukuyigcina, kungoko ziingcali ze-aquarium kuphela ezinokuzama ukuzikhathalela. Ukuzimisela kwabo ekuthinjweni kubangela iingxaki ezinkulu zokuziqhelanisa nokondla.
Ukuba uyingcali kwaye ufuna ukuba nesibindi sokukhathalela intlanzi yezithixo yamaMoor, ngaba ufuna ukwazi yonke into ngale ntlanzi kunye neemfuno zayo?
2.1 Ubungakanani be-Aquarium
2.3 Ukucoca amanzi
2.4 Iiparameter ze-Aquarium
3 Izifo zeZanclus cornutus
4 Ukuphucula ukulungelelaniswa kweZanclus cornutus
I-Zanclus cornutus yeyosapho lakwaZanclidae kunye nomyalelo we-perciformes. Umzimba wayo ubumbeke njenge-disc kwaye ucinezelwe kakhulu emva kwexesha. Umhlathi wayo uyimbumba kwaye unomlomo omncinci onamazinyo amaninzi amade. Ukutya, isebenzisa impumlo yayo ebonakalayo ekrwela kuyo kwaye ikhangele ukutya kwayo phakathi kwamatye, amatye, iziponji kunye nobulembu.
Kuqheleke kakhulu ukuba izihlunu ze-dorsal fin zidibaniswe kwi-filament efana ne-whip. kunye nemivalo emibini emnyama emzimbeni. Iimpiko azomelelanga kakhulu kwaye zihamba. Ukuba umsonto unqunyulwe ngumzingeli okanye ngengozi, unokuphinda ubuye. Iimpawu ezindala zingabonisa i-hump encinci kwindawo yesiphelo sentloko. I-filament ye-dorsal inokuphuhliswa ngakumbi ngeli xesha.
Xa besebancinci, ezi ntlanzi ziyafana angelfish. Iimpiko zayo zangaphakathi zinxantathu ukumila kwaye zimfutshane kakhulu. Kwelinye icala, i-anal fin inemilo yephiramidi, umsila onxantathu kunye neepeketha zijikeleze isetyhula. Le set yeemilo inika intlanzi ubuhle obukhulu.
Banokulinganisa ukuya kwiisentimitha ezingama-25 kwi-aquarium kwaye ukuba bayakwazi ukuziqhelanisa nayo, bayakwazi ukuba nexesha lokuphila elingaphezulu kweminyaka eli-10.
Le yintlanzi ekunzima ukuyinyamekela. Ke ngoko, ziingcali kuphela ezikwaziyo ukuzigcina zisempilweni emanzini. Inkqubo ye- I-Zanclus cornutus ifuna inkathalo ekhethekileyo ukuze iphile. Into yokuqala yokuqwalaselwa yi-aquarium kunye nobukhulu bayo. Endle, le ntlanzi isetyenziselwa ukuhamba ngeekorale kukhangela ukutya. Uyindadi engadinwayo, ngenxa yoko uyakufuna i-aquarium enkulu ngokwaneleyo ukuze uhlangabezane nezi mfuno zohambo. Kufuneka ubuncinci ibe ziimitha ezimbini ubuncinci kwaye ngaphezu kwesiqingatha semitha ububanzi. Ubunzulu Kuyacetyiswa ukuba idlule kwi-50 cm, Ngale ndlela uya kuba nakho ukutyhila onke amaphiko akho.
Enye into ebalulekileyo kukutya kwakho. Kwimeko yayo yendalo itya ikakhulu kuyo ii-microinvertebrates kunye neziponji Bahlala kwiingqaqa zekorale namatye. Ngesi sizathu, i-aquarium kufuneka ibe namatye aphilayo aneleyo kunye neekorale ezilukhuni ezibonelela ngokutya okuyimfuneko kwinqanaba lokuziqhelanisa. Bakwadinga iindawo ezininzi zokufihla xa kufuneka njalo.
Enye yezona mfuno zibalulekileyo (ukuba ayibalulekanga) ngumgangatho wamanzi. Kwindawo yayo yokuhlala yendalo imisinga yamanzi ibuthathaka kwaye amanzi ayo abala ngokucacileyo. Alukho uhlobo lokungcola kwendalo. Oku kuthetha ukuba amanzi akwi-aquarium kufuneka agcinwe ecocekile. Kananjalo akufuneki ishukunyiswe kancinci kwaye amanqanaba e-nitrites, i-ammonia kunye ne-nitrate zihlala zikwi-zero.
Ukuze ezi ntlanzi ziqheleke ngokugqibeleleyo, i-aquarium kufuneka igcine iiparameter ezingqongqo ngokungqongqo. Iqondo lobushushu kufuneka libengqukuva phakathi kwama-24 nama-26 degrees kunye noxinano phakathi ko-1020 no-1024. Xa isondla, le ntlanzi ivelisa inkunkuma ekufuneka icocwe. Ukulungiselela le nto, kucetyiswa iprotein skimmer kunye nokufakwa kweozonators kunye nezibane ze-UV. Oku kuya kusinceda sisuse ezinye iiparasites ezichaphazela impilo yabo.
Izifo zeZanclus cornutus
Njengezihlobo zabo, intlanzi yotyando, isithixo samaMoor sinovakalelo kwizifo ezinje el I-Oodinium kunye I-Cryptocarion. Zombini zizifo zolusu. Kukwanobuzaza nakwisifo sephepha kunye nakwisifo esisecaleni. Ezi zifo zihlala zibuphelisa ubomi beentlanzi.
Ngokubanzi, zonke ezi ngxaki zivela kwinkqubo yokulungelelanisa ukuba le ntlanzi ibandakanya ukungena kwi-aquarium. Amajoni akho omzimba buthathaka ngokwendalo. Ukuba siyibeka phantsi kolungelelwaniso olungaphandle kwendalo esingqongileyo, siya kuyinyanzela ngaphaya kwemida yayo.
Eyona nto uyenzileyo kwezi meko kukuba Sukusebenzisa amayeza anomxholo wobhedu. Ezi ntlanzi aziyinyamezeli kakuhle le ntsimbi.
Ukuphucula ukulungelelaniswa I-Zanclus cornutus
Ukonyusa amathuba okuziqhelanisa nesithixo samaMoor, kufuneka kuthathelwe ingqalelo izinto ezininzi. Eyokuqala kukuba kunyanzelekile ukuba ufumane iisampulu ze-aquarium ngelixa zisencinci kakhulu. Oku kuya kubanceda kwinkqubo yabo yokuziqhelanisa. Njengabantu, abona bancinci banakho ukuziqhelanisa neemeko ezintsha. Okwesibini kukutya kwabo.
Esinye sezizathu zokuba bangakwazi ukuziqhelanisa noxinzelelo. Zibangela ukuba bayeke ukondla nokufa. Ke ngoko, kubalulekile ukugcina i-aquarium enamatye amaninzi kunye nokufihla njengoko besitshilo ngaphambili. Ukuba sifuna ukubazisa nezinye iintlanzi, kufuneka bazole. Ngale ndlela baya kuba nakho ukugcina ubudlelwane obuzinzileyo kwaye bangabinangxaki. Ukuba iintlanzi kunye namanzi zihlala zizolile, uxinzelelo lwakho luya kuncipha.
Ngokumalunga nokutya kwabo, kubalulekile ukuba bondle kuphela kwixhoba eliphilayo njenge-brine shrimp ngeentsuku zabo zokuqala. Oku kuya kubangela ukuba aqale ukutya kancinci. Xa usitya i-brine shrimp ngaphandle kokuziva ukhululekile, sinokuyibuyisela endaweni ngohlobo oluthile lokutya okubandayo. Xa betya konke ukutya okubandayo abakunikiweyo ngaphandle koloyiko, banokuzama sele benako ukutya okomileyo kunye nokomisa okomileyo, abathi ekugqibeleni bakwamkele okoko imeko yabo yempilo ilungile.
Kubaluleke kakhulu ukuba iimeko zamanzi, amatye kunye nokutya zigcinwe zikwimeko efanelekileyo ukuze iintlanzi ziqhele ukuhlala ekuthinjweni. Ngale migaqo unokukhathalela eyakho I-Zanclus cornutus kwiimeko. Ngethamsanqa ngayo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Zanclus cornutus